ANDRESENA NY TAHOTRA NY FINOANA
Accueil du site La Tribune
HAFATRA PENTEKOSTA 2009 par Lala RASENDRAHASINA, président de la FJKM.
Bienvenue sur notre Tribune
Hafatry ny Filohan’ny FJKM taorian’ny Fivorian’ny M.F.
Pour les sans "église" mais qui ne supportent pas la vie d’église .
Article publié le mardi 6 octobre 2015.
Ny Tenin’Andriamanitra toriana ka renesina
no mampitombo ny
“Mampitombo ny finoantsika ny Tenin’Andriamanitra” no lohahevitra iarahan’ny Fiangonana mibanjina amin’izao volana oktobra izao.
Lohahevitra izay mitodika bebe kokoa amin’ny olona efa manana finoana ny Tenin’Andriamanitra na ny finoana an’Andriamanitra miteny aminy.
Ny matoanteny mpampanao : “mampitombo” mantsy, dia tsy ho an’ny olona izay tsy manana izany finoana izany mihitsy, satria ny efa misy ihany no azo ampitomboina, satria na manao ahoana na manao ahoana fahaizana mampitombo, raha aotra (na zero ) ilay ampitomboina dia ho aotra ihany izany.
Raha izay no izy, tsy hivoaka ny trano fiangonana ve isika satria ao no misy ny efa mino ? Ary raha misy ny tsy mpino tafiditra ao am-piangonana, tsy hiteny aminy ve isika ? Hangina ve isika eo anivon’ny tontolo ivelaran’ny fiangonana ? Soa ihany, fa tsy lohahevitra no torian’ny Fiangonana fa ny Tenin’Andriamanitra, ka zary ho toy ny fanondro mikendry fampiharana ihany ny lohahevitra. Aoka ny Tenin’Andriamanitra hatrany no hiaingan’ny toriteny fa tsy ny lohahevitry ny volana iray. Amin’izany, ny Tenin’Andriamanitra toriana no mampitombo ny finoana. Mamitaka ny finoana hafa ivelan’izany ka tsy azo antenaina na ianteherana, na dia maro aza no mahazo finoana vokatry ny fahagagana. Koa zary ivon’ny perikopa rehetra amin’izao volana faharoa amin’ny taona izao ny perikopa araka ny Romana 10, 17 : “ Koa ny finoana dia avy amin’ny tori-teny, ary ny tori-teny kosa avy amin’ny tenin’i Kristy.”
Tonga manana ny anjara toerana lehibe ny tori-teny, tsy azo fehezin’ny ampahefatr’adiny na ny ora telo, satria miantoka ny finoana iainana izay mandrava fampiharam-pinoana ara-pahazarana.
Koa ny Tenin’Andriamanitra toriana ka renesina manao ahoana no mampitombo marina ny finoana ? Amin’ny ankapobeny, dia miseho amin’ny endrika telo samihafa nefa mifameno izany araka ny fanasokajiana ny Soratra Masina :
1.Ny Tenin’Andriamanitra toriana ka renesina mivantana avy tamin’Andriamanitra ao amin’ny Testamenta Taloha no mampitombo finoana :
Ao amin’ny Testamenta Taloha, dia miteny mivantana tamin’ireo mpanompony izay nofidiany manokana Andriamanitra, fa ireo kosa no nampita izany tamin’ny vahoaka na sokajin’olona manokana araka izay nandidian’ny Tompo azy. Miteny mivantana tamin’i Josoa Izy eto (Josoa 1, 1- 9). Naniraka azy hitarika ny vahoaka hiditra ny tany Kanàna na dia fantatr’i Josoa tsara aza ny tanjaky ny tompon-tany tao, satria iray tamin’ireo mpisafo ny tany nirahin’i Mosesy izy ( Zahao, ohatra Josoa 14, 7) Nampanantena fa homba an’i Josoa Andriamanitra amin’izany. Mba hampitombo ny finoana ho azy, dia nodidian’Andriamanitra izy hametraka ny lalàna ho eo am-bavany (and. 8). Ny tenany ihany no asain’Andriamanitra mamerina ny Tenin’Andriamanitra (ny lalàna) ho renesiny (mitori-teny amin’ny tena) mba hampitombo ny finoany. Nehemia 8, 1- 8 : Ny famerenana ny Tenin’Andriamanitra (ny lalàna izany eto) ho ren’ny vahoaka no nataon’i Nehemia. Amin’izany, ny Tenin’Andriamanitra toriana dia eo amin’ny fivorian’ny olona. Azo itarafana ny endriky ny toriteny ho an’ny Fiangonana sy ao amin’ny fiangonana. Manamafy ny maha zava-dehibe ny Tenin’Andriamanitra henoina ao amin’ny fiangonana ny Joela 2, 12- 17. Noho izany, ny olona manadino ny fiaraha-miangona na malaina ho amin’izany, dia tsy hitombo finoana velively.
Salamo 119, 97- 104 : ny teny hoe : “fisaintsainako” ao amin’ny and. 97 hoe “Endrey ny fitiavako ny lalànao ! fisaintsainako mandrakariva izany” dia sarin’ny Tenin’Andriamanitra henoin’ny tena ( toy izay voalaza araka an’i Josoa 1, 1- 9 ) ka mampitombo tokoa ny finoana, mihoatra noho izay azo avy tamin’ny mpampianatra, ny anti-panahy...
2.Ny Tenin’Andriamanitra toriana ka renesina sy tonga nofo araka ny Filazantsara no mampitombo finoana
I Jesoa no Ilay “TENY TONGA NOFO”, raha ambara amin’ny fiteny hafa, Ilay Tenin’Andriamanitra henoina dia miako eo amin’ny fiainan’izay mandre azy. Tsy Teny renesina ihany fa tonga finoana sy zary fiainana mitondra fahombiazana. Eto amin’ny Matio 4, 1- 11 : ny fandresen’i Jesoa ny Devoly dia vokatry ny Tenin’Andriamanitra naveriny indray ; mitondra finoana satria ny Tenin’Andriamanitra ihany no mandresy ny fankam-panahy. Anjaran’ny Mpitoriteny ny mamafy ny Tenin’Andriamanitra amin’ny fomba rehetra mba hisian’ny vokatry ny fitoriana, dia ny finoana iainana ho azon’ny mpihaino. Izany no endriky ny fanoharana araka ny Marka 4, 10- 20. Ny Lioka 10, 38- 42, dia manasongadina ny halehiben’ny fihainoana ny Tenin’ny Tompo mihoatra amin’ny fanompoana. Ataon’ny tsy mahalala ny tenin’ny Tompo ahoana moa no fahalala ny fomba anompoana Azy ? Noho izany, ny tenin’i Jesoa izay tonga nofo, hita vokatra ka ambara amin’ny fiteny ara-pilazantsara hoe :”famantarana” no antoka hitomboan’ny finoana araka ny Jaona 20, 30- 31.
3.Ny Tenin’Andriamanitra toriana ka renesina amin’ny alalan’ny fijoroana ho vavolombelona an-taratasy ifampitondrana no mampitombo finoana
Nanomboka teo amin’ny vanim-potoan’ny fiangonana (tamin’ny andron’ny Apostoly), dia tsy ilay Andriamanitra miteny mivantana amin’ny olona intsony no tonga zava-dehibe fa nisolo Azy ny fijoroana ho vavolombelon’ny TENY TONGA NOFO hampitombo finoana. Tonga nanana ny anjara toerany ny teny voasoratra ka nampitampitaina ho an’ny Fiangonana. Teny voasoratra manana endrika tori-teny nenti-nanoro izay ho fiainana araka ny voalaza. Zary mifamatotra ny Tenin’Andriamanitra sy ny Tori-teny mba hitomboan’ny finoana iainana (Romana 10, 16- 21).
Nomen-danja ny toeran’ny Tenin’ Andriamanitra mba hisy akony eo amin’ny fiainan’ny Fiangonana ka izay rehetra misakana ny Tenin’Andriamanitra tsy ho voarain’ny olona, toy ny lafiny ara-tsosialy (fiahiana ny mahantra), dia tsy maintsy itadiavana vahaolana. Anisan’ny vahaolana hampahomby ny Tenin’Andriamanitra eo amin’ny Fiangonana ny fifidianana tompon’andraikitra araka ny hita Miverina indray ireo voalaza tetsy aloha, ka araka ny Asan’ny Apostoly 16, 1- 5, dia hamafisina fa ny fisian’ny Fiangonana mandray ny Tenin’Andriamanitra, dia sehatra tsy azo sarahina amin’ny fitorian-teny. Rava ny efitry ny fahasamihafana eo amin’ny olona, mitombo ny herim-pinoan’ny olona manao ny fiangonana ho sehatra handraisana ny Tenin’Andriamanitra.
Farany, ampitaina ho an’ny Fiangonana sy ijoroana ho vavolombelona ny 1 Tesaloniana 2, 13- 16, fa ny Tenin’Andriamanitra toriana dia miasa ao anatin’ny olona sy mampiray ny Fiangonana, eny, iraisany hatramin’ny fiaretana ny fanenjehan’ny hafa finoana aza izany.
RAKOTOZANANY Andrianirinomena Jules, Mpitandrina.
Date de heure de Bruxelles :
Mercredi 21 Août 2019 - 1:25:20